म्याचिङ नहुँदा शुरु भएन जनरल इन्स्योरेन्सको शेयर कारोबार - समय-समाचार
म्याचिङ नहुँदा शुरु भएन जनरल इन्स्योरेन्सको शेयर कारोबार
समय-समाचार मंगलबार, २०७७ असोज २७ गते, १३:४४ मा प्रकाशित
काठमाडौं, असोज २७ । मंगलवारदेखि कारोबारयोग्य भएपनि जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको शेयर कारोबार भने हुन सकेन ।
सूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि प्रि–ओपनिङ सेसनमा खरीद र विक्री आदेश म्याचिङ हुनपर्ने हुन्छ । मंगलवार जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर प्रि ओपनिङ सेसनमा म्याचिङ भई कारोबार हुन नसक्दा नियमित सेसनको कारोबार नभएको हो ।
उक्त कम्पनीले सोमवार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा १ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत गराएको थियो ।
कम्पनीले संस्थापकतर्फको ७० लाख र सर्वसाधारण तर्फको ३० लाख कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरेको हो । नेप्सेले मंगलवारदेखि कारोबार शुरु गर्ने गरी पहिलो कारोबारका लागि रू. १०१ दशमलव ७६ देखि रू. ३०५ दशमलव २८ सम्मको रेञ्ज तोकेको थियो ।
उक्त कम्पनीले असोज ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि आईपीओ विक्री गरेको थियो । असोज २० गते बाँडफाँट भएको यो आईपीओ एक साताभित्र धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको हो ।